Nagarik News - धरापमा फुटबल
शुक्रबार ३१ असोज, २०७१
फिफा र एएफसीले आफ्ना कुनै पनि सदस्यमाथि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्विकार्दैनन्। केही महिनाअघि नाइजेरियाली फुटबल संघमा त्यहाँको सरकारले हस्तक्षेप गर्दा पनि फिफाले नाइजेरियाको सदस्यता निलम्बित गरेको थियो। नेपालमा पनि सरकारले सुझबुझसाथ परिपक्व रूपमा कदम नचाले नाइजेरियाकै अवस्था हुन सक्छ।
व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्षसहित मुख्य चार पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बन गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि नेपाली फुटबल अन्योलको घेराबन्दीमा परेको छ। समितिले एन्फामा ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुख्य पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी दुई महिनाभित्र छानबिन गरी थप कारबाही गर्नू भनी असोज ३ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसअनुसार मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत एन्फाका पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी अन्यलाई कार्यवाहक जिम्मेवारीमा तोकेर छानबिन सुरु गरिसक्नुपर्थ्यो। तर, लेखाको निर्णय आफैँमा अस्पष्ट भएको भन्दै मन्त्रालयले निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। साथमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन र नियमका आधारमा चल्नुपर्ने फुटबलमा कुनै हस्तक्षेप गर्दा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले नसहने भयले पनि मन्त्रालय लेखा समितिको निर्देशन पालना गर्न हच्किएको छ।
फिफा र एएफसीले आफ्ना कुनै पनि सदस्यमाथि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्विकार्दैनन्। केही महिनाअघि नाइजेरियाली फुटबल संघमा त्यहाँको सरकारले हस्तक्षेप गर्दा पनि फिफाले नाइजेरियाको सदस्यता निलम्बित गरेको थियो। एक महिनापछि सरकारले निर्णय फिर्ता लिएपछिमात्र नाइजेरियाको फिफा सदस्यता पुनःस्थापित भएको थियो। नेपालमा पनि सरकारले पूरा सुझबुझसाथ परिपक्व रूपमा कदम नचाले नाइजेरियाकै अवस्था हुन सक्छ। एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा स्वयं एएफसीको उपाध्यक्ष रहनुले पनि उनीमाथि सरकारले कुनै कारबाही गरे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नेपालको नहुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। लेखा समितिको निर्देशन आएपछि थापाले पटक–पटक एन्फा वा त्यसका कुनै पदाधिकारीमाथि कुनै कारबाही भए नेपाल प्रतिबन्धमा पर्ने बताइसकेका छन्।
यसैगरी राष्ट्रिय खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीको समूहले मन्त्रालय तथा परिषद्मा डेलिगेसन गएर पनि एन्फामाथि कुनै हस्तक्षेप गरेर फुटबल रोकिने वातावरण हुन नदिन अनुरोध गरिसकेका छन्। तर, लेखा समितिले भने भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन र कारबाहीलाई फिफा तथा एएफसीले हस्तक्षेपका रूपमा लिएर नेपाली फुटबललाई प्रतिबन्ध नगर्ने दाबीका साथ तीन दिनभित्र निर्देशन पालना गर्न मन्त्रालयलाई सोमवार पुनः निर्देशन दिएको छ। लेखाको दोस्रो निर्देशन मन्त्रालयले पालना गर्ने हो भने बिहीवारसम्ममा एन्फा अध्यक्ष थापासहित प्रथम उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठ, महासचिव धीरेन्द्र प्रधान र कोषाध्यक्ष विराटजंग शाही निलम्बनमा पर्नेछन्।
थापाले भनेजस्तै एएफसी र फिफाले त्यसलाई नसहे उनीहरू निलम्बनमा परेको केही घण्टाभित्र नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धमा पर्नेछ। जसका कारण कात्तिकमा सुरु हुने भनिएको राष्ट्रिय लिगसँगै नेपालका सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि धरापमा पर्नेछन्। यही अक्टुबर ३१ मा कतारमा हुने तय भएको फिलिपिन्सविरुद्धको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल पनि प्रभावित हुनेछ।
त्यसो भन्दैमा बेथिति, कुशासन, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिने त? पक्कै होइन। तर, राज्यको जिम्मेवार निकायले कुनै पनि निर्णय लिँदा परिपक्व र विधिसम्मत हुन सक्नुपर्छ। अरूलाई विधिसम्मत नचलेको भनेर कारबाही गर्दा आफैँले विधि मिच्ने कुरा पाच्य हुँदैन। भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। थापालगायतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए उनीहरूलाई निलम्बन होइन, बर्खास्त गरेर जेल हाल्न सक्नुपर्छ र उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको रकम असुल उपर गर्नुपर्छ। लेखाले नै भनेअनुसार दुई महिनाभित्र सबै छानबिन पूरा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अब डेढ महिना पनि बाँकी छैन। त्यो अवधिमा छानबिन पूरा गरेर दोषी भए कारबाही गर्ने, निर्दोष भए ‘क्लिन चिट' दिनुपर्छ। कम्तीमा राज्यले कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथि इवी साँधेर निर्णय गर्नेभन्दा सही निर्णय गर्नुपर्छ।
लेखा समितिले एन्फाका हकमा गरेका निर्णयमा धेरै अपरिपक्वता देखिन्छ। अख्तियारले यसअघि नै छानबिन सुरु गरिसकेको अवस्थामा छानबिन गर भन्नुको अर्थ रहन्न। यसैगरी ५८ करोडभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको भने पनि समितिले आफ्नै निर्णयको विवरणमा त्यो रकम कारोबार भएको अनुमानमात्र लगाएको छ। प्रारम्भिक निर्णयमा निलम्बन गर्नू भने पनि कस–कसलाई भन्ने खुलाएको छैन। जसका कारण समितिले भावनामा आएरमात्र निर्णय गरेजस्तो देखिन्छ। यस्तो अपरिपक्व निर्णयले एन्फामा अनियमितता भएको भए पनि दोषीलाई कारबाहीको सट्टा उम्कन बाटो सजिलो बनाउँछ।
लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने क्रममा एन्फामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसकेको छ। समितिले भ्रष्टाचार ठहर गरिसकेपछि थप छानबिन गर भन्नु आफ्नै निर्णय आफैँले नपत्याउनुजस्तो हो। भ्रष्टाचार भएकोमा आफूलाई विश्वास भए समितिले सोझै कारबाही सिफारिस गर्नुपर्छ। थप छानबिनका लागि अन्यत्र निर्देशन दिँदा त्यसमा भ्रष्टाचार साबित नभए समितिको कार्यशैली, परिपक्वता र नियतमा प्रश्न उठाउने थुप्रै ठाउँ मिल्नेछ।
थापालगायतको टोलीले एन्फा नेतृत्व गरेको दुई दशक नाघिसक्यो। २० वर्षभन्दा बढी नेपाली फुटबलमा राज गरेकालाई दोषी नै भए पनि थप दुई महिना त्यहाँ बस्न दिएर केही हुने होइन वा डेढ महिनाका लागि कसैले कार्यवाहक आएर पनि गर्ने केही होइन। डेढ महिनामा छानबिन पूरा हुँदा थापालगायत दोषी साबित भए स्वतः कारबाहीमा पर्छन्। त्यसपछि नयाँ स्थायी नेतृत्व खोज्न सकिन्छ। उनीहरू निर्दोष साबित भए आफैँ एन्फामा पुनरागमन जनाउँछन्। त्यसैले सबै छानबिन पूरा गरेर अन्तिम निर्णयका साथ कारबाही गर्नु बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुनेछ। बरु छानबिनको त्यो अवधिलाई पनि अझ कम गर्न सकिन्छ। त्यसो भएमा फिफा र एएफसीले प्रतिबन्ध लगाउने जोखिम पनि कम हुन्छ। अझ एन्फा पदाधिकारीले छानबिनमा आफूहरू दोषी ठहरिए आफैँ राजीनामा दिएर कारबाही भोग्न तयार हुने बताउँदै आएका छन्। पदाधिकारी स्वयंले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए फिफाले कारबाही गर्ने सम्भावना रहन्न।
युवा मित्र,तपाईंमध्ये कैयौँलाई 'राजनीतिु मन पर्दैन। तर, यो मन नपरेको राजनीति हो कि राजनीतिको दैनिक चलखेलरु म अलि गहिरो कुरा गर्न खोज्दै छु। पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो आदि सबै सञ्चारमाध्यमले चौबीसै...
हल म्यानेजरका मनोरञ्जन काइदा
मनोरञ्जन गर्न मानिसहरू फिल्म हल जान्छन्। हलमा मनोरञ्जनको चाँजोपाँजो मिलाइदिने म्यानेजरहरू चाहिँ कसरी मनोरञ्जन गर्दा हुन्?
विदेशिने र ठगिइने अनन्त क्रम
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कामको खोजीमा १ लाख २९ हजार कामदार विदेशिएका छन्। गत आव सोही अवधिमा ९७ हजार १ सय ८० कामदार विदेशिएका थिए। यो ३३ प्रतिशतले...
रहेनन् 'हलो जोत्ने साथी'
'नेपाली लोक–गीत ओझेलमा पर्लान् भन्ने पिर लाग्छ,' गायक धर्मराज थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै थिए, देउडा गायक नन्दकृष्ण जोशी, 'अहिलेका लोक–गीत, लोक–गीतजस्ता लाग्दैनन्। गाउँघरका भाकालाई जथाभावी शब्द हालेर बंग्याइएको छ।' केही...